[ข่าว PR] เปิดโลกสู่ AEC, Myanmar Website Design in Thailand - ข่าวสดวงการเว็บไซต์ และการตลาดออนไลน์
admin5 มิถุนายน, 20142.1K Views0
A Time Web Design ဆိုသည်မှာ….
နှစ်ဆယ့်တစ်ရာစုတွင် Website နှင့် email တို့သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများဖြစ်လာကြသည်။ Website တစ်ခုသည် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ရှိ လူအားလုံးဆီသို့ သတင်းအချက်အလက်များ ပေးပို့ရာတွင်ကူညီနိုင်ပြီး ကြီးမားသည့်စီးပွားရေး(လုပ်ငန်း) အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေနိုင် ပါသည်။ သင့်ကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်း (domain) ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော email address ကိုသုံးခြင်းဖြင့် သင့်လုပ်ငန်းအပေါ်ယုံကြည်မှုနှင့် သင့်လုပ်ငန်း၏ အခြေအနေကို မြင့်မားစေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ကုမ္ပဏီ၊အဖွဲ့အစည်းများ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျယ်ပြန့်လာစေရန် A Time Web Design မှ အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများထည့်သွင်းပေးထားပါသည်-
Web Development (Web design & Programming ပြုလုပ်ခြင်း)
Web Template (Low Cost Website ပြုလုပ်ခြင်း) 2,500 Baht Thai
Web Hosting (Website & Email ဖန်တီးခြင်း)
A Time Web Design တွင်ပြုလုပ်ဖန်တီးထားသော Web ဒီဇိုင်းပေါင်းရာကျော်ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့အထဲမှ သင့်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော ဒီဇိုင်းအား ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ (ပါဝင်သော ပုံများနှင့် အရောင်များအား ပြောင်းလဲနိုင် ပါသည်။) အောက်ပါ Web ဒီဇိုင်းများ မှာ A Time Web Design မှ ပြုလုပ်ဖန်တီးထားသော နမူနာ ပုံစံများဖြစ်သည်။ Click
A Time Web Design คือผู้ให้บริการจัดทำเว็บไซต์ เว็บโฮสติ้ง และอีเมล์ที่เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับธุรกิจเว็บไซต์ สามารถช่วยให้บริษัทของคุณเป็นที่รู้จักของคนทั้งโลก และทำให้โอกาสของธุรกิจขนาดใหญ่ได้ใช้อีเมล์ และโดเมนของตัวเองของบริษัทของคุณสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือ และสักกะยะภาพธุรกิจคุณได้
A Time Web Design มีบริการเพื่อช่วยให้บริษัท และองค์กรของพม่าที่จะขยายธุรกิจของเขา ทั้งที่อยู่ในไทย หรือพม่า
เว็บไซต์สำเร็จรูป (เว็บไซต์ราคาประหยัด) 2,500 บาท
เว็บโฮสติ้ง (สร้างเนื้อที่ของเว็บไซต์ มีอีเมล์ และโดเมนเนมในการใช้งาน)
ผลงานของพวกเรามีกว่าหลายร้อยผลงาน สามารถเลือกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ ทุกรูปแบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และนี่เป็นตัวอย่างบางส่วนของการออกแบบเว็บไซต์ของเรา Click
Contact : info@atimedesign.com
Website : www.atimedesign.com
Previous Articleวงการดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแฉ!5เทรนด์ของเว็บไซต์ ที่มาแรงในปี 2014
Next Article[Reference] Trend ใหม่ เพื่อคนยุคใหม่ เว็บไซต์ของน้องใหม่ ดาวิกา!